“Waxaanu Bulshada Somaliland & Beesha Caalamka U Sheegayna In Aanay Sinaba Suuro Gal U Ahayn In Ay Laba Xisbi Yidhaahdaan ‘Anaga Somaliland Sida Aanu Doonno Ka Yeelayna,” Dr Cirro | Hayaan News
“Waxaanu Bulshada Somaliland & Beesha Caalamka U Sheegayna In Aanay Sinaba Suuro Gal U Ahayn In Ay Laba Xisbi Yidhaahdaan ‘Anaga Somaliland Sida Aanu Doonno Ka Yeelayna,” Dr Cirro
Hargeysa(Hayaannews) Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee WADDANI Dr Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro) ayaa sheegay in aanay sinaba Somaliland uga suuro galayn qorshaha ay ku heshiiyeen xukuumadda Kulmiye iyo xisbiga UCID ee ah in ay isku raaceen arrimo la xidhiidha qabsoomidda doorashada oo WADDANI ka maqan yahay. Waxa uu si weyn u dhalliilay qorshaha labada xisbi waxaanu tilmaamay in xisbiga WADDANI diyaar u yahay qabsoomidda doorashada iyo in laga wada hadlo dhammaan caqabadaha hor yaalla doorashooyinka.
Dr Cabdiraxmaan Cirro oo masuuliyiinta sarsare ee xisbiga WADDANI iyo Taageerayaashiisu ku soo dhaweeyeen madaarka Hargeysa shalay waxa uu sheegay in Somaliland ay ururin u baahan tahay laakiin, ficillada xukuumaddu yihiin kuwo kala kaxaynaya bulshada “Waxaynu doonaynay Somaliland la ururiyo oo shacbigeeda la ururiyo oo wada jirkeeda la ururiyo laakiin, waxaad moodda in dhacdooyinka isdaba socda midba mid ka yaab badan tahay! Shalay xukuumaddii Somaliland iyo labadii xisbi ee Kulmiye iyo UCID waxay soo saareen waxay ku sheegeen go’aan laakiin, go’aan muu ahayn waxaynu ku macnayn karayna oo kaliya in uu ahaa shahaadadii dhimashada ee hannaankii dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka Somaliland, Illaahay ha inooga sahlo Somaliland-na way galaafan karta arrintaasi,” Sidaas ayuu yidhi Dr Cabdiraxmaan Cirro
Guddoomiyaha WADDANI waxa uu intaasi raaciyay in aanay laba xisbi kaligood go’aan ka gaadhi Karin masiirka Somaliland “Waxaanu u sheegayna tallaabada ay qaadeen in aanay ahayn mid u danaynaysa hannaanka dimuqraadiyadda Somaliland iyo in doorashooyin dalka ka qabsoomaan, maaha tallaabo u danaynaysa midnimada shacbiga iyo wada jirkooda laakiin, waa tallaabo dildillaac ku keeni karta bulshada Somaliland , waxaanu u sheegayna tallaabada ay qaadeen in aanay sinaba uga suuro gal ahayn Somaliland in ay laba xisbi yidhaahdaan ‘Somaliland anaga sida aanu doonno ka yeelayna’ inta ay gaar u tashadaan,” Sidaas ayuu yidhi Dr Cabdiraxmaan Cirro.
Waxa uu intaasi sii raaciyay in gabi ahaanba go’aankaas xisbiga Waddani gaashaanka u daruuray “Farriinta aan u dirayo shacbiga reer Somaliland iyo Beesha Caalamku waxa weeye go’aanka magaca ay doonaan ba ha u bixiyaane in aanu deedafaynay oo aanan ogolayn oo aanu diidnay xisbi ahaan, Waxa uu xisbiga WADDANI Beesha Caalamka iyo shacbigaba u sheegaya in uu diyaar u yahay doorashooyin wakhtigoodii ku qabsooma. waxa kale oo aan u sheegaya bulshada Somaliland iyo Beesha Caalamkaba in aanay suuro galayn in kaligii xisbi doorasho Somaliland ka qabsado. Waxaanu leenahay labada xisbi iyo xukuumaddana taladii waad la ambateen anaguna waxaanu diyaar u nahay miiskii wada hadalka sidii aanu awalba diyaar ugu ahayn ee talada halkeedii ha lagu soo celiyo haddii la doonayo in doorashooyinku wakhtigoodii ku qabsoomaan.”
Ugu Dambeyn waxa uu guddoomiye Cabdiraxmaan Cirro bulshada u diray farriin “Waxaan shacbiga Somaliland ugu baaqaya, walaalayaal xukuumaddii aynu dooranay waad aragtaan, labadii xisbina waynu aragnaa, in ay ambadeena waynu aragnaa, Aadan Carab baa tilmaamay dadka ambada oo wuxuu yidhi ‘Nin Ambaday Halkuu aaday way ula eekaatay, anigoo arkaayaan waddadii Eerigo maray’ waxaan leeyahay labada xisbi iyagoo arkayay wadadii Eerigoo Mareen. Somaliland waa la wada leeyahay, taladeeda waa la wada leeyahay, cid gaar u tashan karta ma jirto. Go’aankooda marnaba kumay xusin caqabadihii doorashada hor taagna iyo sida loo qaadayo, waxaa is waydiin leh waxay yidhaahdeen ‘Komishanku ha joogo ilaa 29-ka November’ waxay yidhaahdeen ‘Ogos baanu soo jeedinay in la magacaabo Komishankii cusba’ Maxaa u diidaya in May la magacaabo? Maxaa u diidaya in June la magacaabo? Sharciga kaa u ogolaaday muxuu kan ugu diidan yahay? Haddii doorasho la doonayo talo ha la isugu yimaaddo, doorashadii diyaar baanu u nahay, shacbiga Somaliland na waxaan ku dardaaraya maaddaama aynu aragno xukuumaddii iyo taladeedii, maaddaama aynu aragno labadii xisbi iyo taladoodii midnimadeenu waa muhiim, wada jirkeenu waa muhiim, duruufaha ina haysta ee inagu gadaaman waxaynu kaga bixi karayna midnimo, Somaliland hadday wada hadli kari waydo oo Axsaabtu wada hadli kari waydo Soomaaliya sidee bay ula hadlaysa? Bal idinku is waydiiya?
Dr Cabdiraxmaan Cirro waxa uu si weyn u cambaareeyay qaar ka mid ah falalkii dalka ka dhacay muddadii uu maqnaa “Intii aan Maqna Somaliland waxa ka dhacayay dhacdooyin yaab leh. Hees baa odhan jirtay ‘dharaaraba wax yaabla igu soo dhacaya’ Intii aan maqna dhacdooyinka dhacay way badnaayeen laakiin, waxaan ka soo qaadan doona in yar oo faro ku tiris ah; waxa ka mid ah hooyooyinkii iyo umulihii lagu laayay dhulkoodii ee iyagana la xidhxidhay ee oohintooda qof walba oo reer Somaliland ah gudo iyo dibadba uu gaadhay codkoodu. Waxa ka mid ah muwaadiniin dan yar ah oo maxkamadi ku xukuntay lacag ku dhaw 7 Boqol oo kun oo dollar midkiiba. Waxa ka mid ah saxaafaddii madaxa bannaanayd oo sidii xoolaha loo xarraasayo oo jeelka laga buuxinayo, waxa ugu dambeeyay kuwii jidh dilka loo gaystay Tifaftirihii Bulsho Tv iyo Cabdimaalik Coldoon oo Burco laga soo afduubay,”
Xukuumadda Oo Sii Daysay Laba Haween Ah Iyo Canada Oo Muwaadiniinteeda Uga Digtay Somaliland
Hargeysa(Waaberi) Xukuumadda Somaliland ayaa xabsiga ka sii daysay laba dumar ah oo magaalada Hargeysa ku xidhna saddexdii bilood ee u dambeeyay. Haweenka ayaa lagu xukumay xabsi dhan laba bilood iyo badh kadib markii lagu eedeeyay in ay isticmaaleen daroogo.